Bitsibitsika Afghan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2017 3:51 GMT
Misy ny bilaogy Afgana vaovao izay mampiroborobo ny fandriampahalemana sy ny tsy fisian'ny herisetra eto amin'izao tontolo izao. Toy izao no novakianay tao amin'ny Afghan Peacemakers:
We feel sorry for the civilians lost and we hope tribal people help their government and identify those whom shelter the terrorists. If the government of Pakistan is against the US air strikes on Pakistani soil, then the Pakistan government must take serious action against the terrorists in those remote lands so there will not be a need for the US to conduct military operations in Pakistan. We know that Pakistan is a close ally of United States in the war against terrorism, but Pakistan should prove it by actions, not words.
Malahelo ireo sivily (namoy ny ainy) izahay ary antenainay fa hanampy ny governemantany ireo olona ara-poko mba hamantatra ireo miaro ny mpampihorohoro. Raha manohitra ny daroka an'habakabaka Amerikana ao amin'ny tanin'ny Pakistaney ny governemanta ao Pakistana, dia tsy maintsy manao hetsika goavana manohitra ny mpampihorohoro ao amin'izany tany lavitra izany ny governemanta Pakistaney ka tsy hisy intsony ny ilàna ny Amerikana hitarika hetsika miaramila any Pakistana. Fantatray fa mpiara-dia akaiky amin'i Etazonia amin'ny ady atao amin'ny fampihorohoroana i Pakistan , saingy tokony hanaporofo izany amin'ny hetsika fa tsy amin'ny teny i Pakistan.
Misy ireo bilaogera Afgana izay tena sanganehana manoloana ny fihetsik'i Iran raha nanafoana ny diany tany Teheran ny Filoha Karzai. Araka ny filazan'i Sohrab Kabuli, nilaza ny filoha Afghan fa najanona ny diany noho ny toetr'andro ratsy sy ny olana ara-teknika. Nilaza koa i Karzai fa handeha ho any Iran izy aorian'ny fihaonambe ao Londra momba an'i Afghanistan. Nilaza ity bilaogera ity fa manampahefana Iranianina sasany sy tranonkala Iraniana sasany no nilaza fa nahazo baiko avy amin'i Etazonia mba hanafoana ity diany ofisialy ity ny governemanta Afghana. Nandray ny politikan'ny governemanta Iraniana ao amin'ny faritra ho tsy manam-pototra ity bilaogera ity ary nilaza koa tsy manaraka ny fenitra diplaomatika ny fihetsik'i Iran. Hoy koa izy, “Raha tsy firenena mahaleo tena i Afghanistan ho an'i Iran, nahoana izy ireo no mandefa ny ambasadaorony aty amin'ny firenenay ary manaiky ny ambasadaorontsika!”